‘सञ्चारगृहको टिकाउ’ र ‘पत्रकारिताको गुणस्तर’ मुख्य चुनौती | Radio Jagaran
Home Jagaran Daily ‘सञ्चारगृहको टिकाउ’ र ‘पत्रकारिताको गुणस्तर’ मुख्य चुनौती
‘सञ्चारगृहको टिकाउ’ र ‘पत्रकारिताको गुणस्तर’ मुख्य चुनौती
नेपालमा दिनप्रतीदिन सञ्चारमाध्यम खुल्नेक्रम जारी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पत्रिका, टेलिभिजन र रेडियो पुगेको छ । सञ्चारमाध्यमको विकास जति छ, गुणस्तर भने निकै डरलाग्दो गरि खस्केको छ । सञ्चारगृहरु आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदा पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत लागु हुन सकेको छैन । सञ्चारगृह बढिरहदा गुणस्तर किन खस्केको होला ? नेपालका सञ्चारगृहको व्यवस्थापन कसरी होला ? आज हामीले समग्र मिडियाको अवस्थाबारे नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
कार्कीको जन्म धनकुटा जिल्लाको लेगुवा गाविस वडा नं १ छुमलिंगमा भएको थियो । सवोच्र्च अदालतको बरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा नेपालका कानुनी क्षेत्रमा निरन्तर क्रियासिल श्री कार्की संग नेपालको राजनिति, कानुन तथा शान्ति प्रकियाका विषयमा समेत गहन अध्यन, अनुभव रहेको छ । कार्कीको पृष्ठभुमी पत्रकारिता हो । सम्पादक विनोद परियारले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
पत्रकार बन्न ‘लाइसेन्स’ अनिवार्य
पूर्वाधारबिना सञ्चारगृह खोल्न दिनुहुन्न
आयोजनाका विज्ञापन कम्तीमा ४० प्रतिशत जिल्लाकै मिडियालाई दिनुपर्छ
पत्रकारहरुको बर्गिकरण राज्ले गर्नुपर्छ
प्रेस काउन्सिलको अधिकार बढाउनुपर्छ
प्रेस काउन्सिलको नजरमा नेपालका मिडियाहरु अहिले कुन अवस्थामा छन ?
नेपालमा अहिले मिडियाको संख्या धेरै छ । पत्रकारको संख्या पनि अत्यधिक नै छ । राजधानी काण्ठमाडौं र जिल्लामा रहेका मिडियाहरुको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । यसले गर्दा मिडियाको दाीगोपनाको बिषय सबैभन्दा जटिल रुपमा आएको छ । मिडियाको गुणस्तर पनि खस्किदै छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा मिडियाको दीगोपना र प्रभावकारीता बनाउनु हाम्रा लागी चुनौती बनेको छ । नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई टिकाउन, पत्रकारहरुको संख्या मात्रै बढाउने भन्दा गुणस्तर कसरी कायम राख्ने, उनीहरुलाई कसरी क्षमतावान बनाउने र स्थानीय मिडियालाई कसरी हुन्छ बलियो बनाउने भन्नेबारेमा प्रेसकाउन्सिलले केहि कामहरु शुरु गरिसकेको छ ।
तपाईहरुको भनाई अनुसार त नेपालका मिडिया समस्याग्रस्त देखिए ? कारण के होला ?
खास गरेर नेपालमा मिडिया बिना पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने परिपाटी छ । सञ्चारगृह खोल्नुअघि योजना बनाएर कसैले पनि सञ्चालन गरेको पाइँदैन । फलस्वरुप केही बर्षपछि नै मिडियामा समस्या देखिने गरेको छ । कसैले मिडिया सञ्चालन गरेमा त्यसैको देखासिकी गर्ने, कुनै शक्ति वा दलहरुको स्वार्थका लागि पनि मिडियाहरु सञ्चालन हुने गरेको छ । यसले गर्दा सञ्चारगृहको दीगोपनामा संकट देखा परेको हो । पत्रकारहरुले पनि यो बिषयमा सोच्न जरुरी छ । मिडियाको भविष्य, योजना पत्रकारहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । पत्रकारिता भविष्य सोचेर गर्ने पेशा हो । खाली रहर पूरा गर्ने सोचले पत्रकारिता गर्नुभएन । यसले गर्दा आज सञ्चारगृहसँगै पत्रकारहरुको पेशा पनि उतिकै जोखिममा परेको छ । जब गुणस्तर हुँदैन तब समस्याहरु देखिन्छन ।
त्यसो भए, प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको गुणस्तर कायम राख्न के योजना बनाएको छ त ?
हामीले केहि काम गर्ने जमर्को गरेका छौं । अहिले भइरहेका मिडियालाई कसरी टिकाउ बनाउने भन्नेबारेमा छलफल र बहस भइरहेको छ । बिशेष गरि जिल्लाका सञ्चारगृहलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने सोच छ हामीसँग । जिल्लामा रहेका सञ्चारगृहको आर्थिक आधार भनेको विज्ञापन नै हो । तर, विज्ञापनले थाम्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लागि नयाँ निति र व्यवस्थाको आवश्यता देखिएको छ । त्यसैले मन मिल्ने सञ्चारमाध्यमहरुलाई मर्ज गराउन सकिन्छ ।
यसको लागि नयाँ सञ्चारनितिले पनि बोलेको छ । त्यसैले अहिले मर्जर सिस्टममा आउने सञ्चारगृहलाई कसरी हुन्छ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने लबिङमा हामी लागेका छौं । अर्को कुरा भनेको नयाँ सञ्चारगृह दर्ता गर्दा, रेडियो टिभिको लाइसेन्स दिदा पूर्वाधार नभएकाहरुलाई दर्ता नै गर्ने, लाइसेन्स नदिने कडा नियम बनाउनुपर्छ भनेका छौं । यसका साथै जिल्लाको पत्रकारिता टिकाउन आयोजनाका विज्ञापनहरु ४० प्रतिशत जिल्लाकै मिडियालाई उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छौं । जिबिस, नगरपालिकालाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि विकास बजेटमै राख्नुपर्छ, बैंकहरुलाई मिडियाका लागि सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि काउन्सिलले सुझाव दिएको छ । यसका साथै मिडिया हाउसले पनि स्थानीय मुद्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।यसको लागि काउन्सिलले काम गरिरहेको छ ।
तर, नि अध्यक्ष ज्यू, नेपालमा त पहुँच, राजनितिक दलको दबाबमा सञ्चारगृहहरु दर्ता हुने परिपाटी छ नी, तपाइहरुले भनेजस्तै गरि काम हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
होईन, हामीले मात्रै भनेको होईन । अब त सञ्चारगृहको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने समस्या त सञ्चालकहरु र पत्रकारलाई नै पर्ने हो । त्यसैले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नेपर्छ । हो, राजनितिक पार्टी र पहुँचका आधारमा सञ्चारगृह दर्ता हुने र लाइसेन्स लिने काम हुन्छ । तर, अब यसले स्वयम सञ्चालकलाई नै समस्या पारिराखेको छ । राजनितिक पार्टीहरुले मिडिया सञ्चालन गर्ने परिपाटी फरक छ। तर, मिडियाको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ । यदी राजनितिक मिडिया
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की
बन्न पुग्यो भने जनताले के पाउँछन् । जनताले पाउने सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना त पाउँदैनन् । यस्तो एउटा विचार, समूहको मात्रै गुनगान गाउने मिडिया टिक्दैनन । तसर्थ अब मिडिया हाउसहरुलाई पनि घटाउँनुपर्छ । पत्रकारिताको गुणस्तर पनि बृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले त को पत्रकार को पत्रकार होईन छुट्टाउन सम्म सक्ने अवस्था छैन ।
डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल हुन एउटा तहको परीक्षा दिनुपर्छ । उनीहरुसँग लाइसेन्स चाहिन्छ । तर पत्रकार जो पनि हुन सक्ने यस्तो अवस्था अब धेरै दिन रहन दिन हुन्न । जसरी बिएल पढेपछि वकिलका लागि बारको परीक्षा दिएर लाइसेन्स प्राप्त गर्छ र बल्ल काम गर्न सक्छ त्यस्तै गरि पत्रकारको लाइसेन्सको परीक्षा हुनुपर्छ । पूराना पत्रकारहरुलाई पनि त्यहि खालको पाठ्यक्रम बनाएर अब पत्रकारको लाइसेन्स आवश्यक पर्छ । त्यसैगरि सम्पादकको पनि बर्गिकरण गर्नुपर्छ । अब राज्यले नै सम्पादक, बरिष्ठ सम्पादक, संवाददता जस्ता पदको बर्गिकरण गर्नुपर्छ ।मिडियामा कामै नगर्ने, अनुभव नै नभएको व्यक्ति स्नातक तह उतीर्ण गरेको हकमा पत्रिकामा सम्पादक भइरहेका छन् । यसको अन्त्य गर्नेपर्छ ।
अहिले नयाँ सञ्चार निति आउँदैछ, त्यसले के के बिषय समेटेको छ ?
नयाँ सञ्चार नितिको प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा समितिले दिएको छ । त्यसमा बिशेष गरि अहिलेका मिडियाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै उल्लेख गरिएको छ । मिडियाको दीगोपना र गुणस्तरका बिषयमा छलफल नितिमा कसरी समावेश गराउने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई अलि स्वतन्त्र बनाउने, निजि क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई बढि जिम्मेवार र उत्तरदायि बनाउने गरि मिडियालाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने कुरा प्रारम्भिक चरणको नितिले समेटेको छ । बदलिदो परिस्थितीमा बढि व्यस्थितत र गुणस्तरीय बनाउने र समग्रमा सञ्चारगहृको व्यवस्थापन, पत्रकार हकहितको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
नेपालमा रेडियो, टिभि, पत्रिका र अनलाईन सञ्चारमाध्यमको विकास तिव्र छ , प्रेस काउन्सिलले कुन सञ्चारमाध्यममा बढि समस्याग्रस्त देखेको छ ?
समस्या सबैमा छ । सबभन्दा पूरानो सञ्चारमाध्यम छापा नै हो । छापा माध्यमको ज्ञान, सिप लिएर रेडियो, टिभि र अनलाईन खुलेका हुन । नेपालमा अहिले एफएम जहाँत्यहि छ । टेलिभिजन पनि जिल्ला जिल्लामा भए । आर्थिक रुपमा सबै माध्यमका मिडिया कमजोर छन् । यसको कारण स्वयम मिडिया हाउसको योजना र खाका नहुनु पनि हो । आज पनि चार वटै माध्यममा छापाकै शैली छ । अर्थात सबैले एउटै खालको सूचनाहरु पस्किरहेका छन् ।
यसले मिडियाको गुणस्तर र पाठक÷दर्शक÷श्रोताको रुचीमा प्रभाव पार्न सकेको छैन । एफएम रेडियो सबभन्दा प्रभावकारी हो नेपालको सन्दर्भममा । तर, आर्थिक रुपमा बढि नै संकटग्रस्त अवस्थामा एफएम रेडियो पुगेका छन् । टेलिभिजन पनि श्रब्य, दृश्य सबै कुराले प्रभावकारी हो । तर बिडम्बना काण्ठमाडौंकै कयौं टेलिभिजन समस्याग्रस्त छन् । जिल्लामा त बरु त्यति धेरै टेलिभिजनहरु छैनन । अनलाईन पत्रकारिताको शुरुवात भर्खरै बिकसित भइरहेको छ । तर, यसमा समस्या उस्तै हो । समग्रमा नेपालको मिडियाहरु आर्थिक रुपमा सबल छैनन । आवश्यकता भन्दा धेरै मिडियाहरु भए । तसर्थ यसको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य आवश्यकता नै हो ।
नेपालमा पत्रकार र व्यवस्थापनविच द्धन्द्ध भइरहन्छ, किन ?
अहिले त धेरै छापा माध्यमहरु साना लगानीमा आफै रिर्पोटर, आफै सम्पादक भएर काम गरिरहेका छन् । त्यस्तामा यो समस्या छैन । तर, ठूला सञ्चारगृहमा सम्पादक र व्यवस्थापन पक्षविच भिन्नता देखिएको छ । व्यवस्थापन पक्षले लगानीको संरक्षण गर्न खोज्ने र सम्पादकले जनतालाई सुसुचित गराउन खोज्ने सन्दर्भमा यस्तो द्धन्द्ध देखिएको हो । लगानीकर्ताले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । अब त कुनै पनि सूचना लुक्न सक्दैन । तसर्थ मिडियाले कहिल्यै सूचना लुकाउनै हुन्न । त्यो भनेको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा लगानीकर्ताले आफ्नो छायाँ पार्नु हुँदैन । र त्यसो गर्न दिनुपनि हुन्न ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउने सन्दर्भमा तपाईहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । तसर्थ यो लागु हुनपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो । अब लगानीकर्ताहरुले के सोच्नुप¥यो भने जबसम्म सम्पादक, रिर्पोटरले आफ्नो पेशा सुरक्षित भएको ठान्दैनन तबसम्म गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो । यदि यसो भएमा सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर स्वतहः बृद्धि भइनै हाल्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गरेर मिडिया हाउस सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय सामाग्री आउँछ र पत्रकारहरुले पनि आफ्नो गुणस्तर बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रेस काउन्सिल गुनासा सुन्छ, मिडियाको नियमन पनि गर्छ, तर सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने व्यापक गुनासो छ ? के भन्नुहुन्छ ?
तपाईले भनेजस्तै गुनासो छ । यो सत्य पनि हो । प्रेस काउन्सिल २०४६ सालको परिवर्तनपछि सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न भनेर २०४८ सालमा बन्यो । त्यतिखेर मिडियाको संख्या पनि थोरै, पत्रकारहरु पनि निकै थोरै थिएँ ।
आज सञ्चारमाध्यम पनि धेरै, पत्रकारहरुको संख्या पनि उतिकै धेरै । तर,२०४८ सालकै निति अनुसार काउन्सिल हिडिरहेको छ । हामीसँग कर्मचारी पनि ४८ कै अनुसार, अधिकार पनि ४८ कै छ । बजेट न्यून, कर्मचारी थोरै हुँदा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको हो । हामीसँग भएका साधन श्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर काम गरेका छौं । तसर्थ अपेक्षा निकै धेरै भएकाले सबैको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको हो । अब काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र यसको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
बुटवलबाट प्रकाशित खस्यौली साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तरवार्ता